FAMPAHALALANA SY SARY AN-TSARY MOMBA NY ALIKA KELY SHAR-PEI - ALIKA
Fampahalalana sy sary an-tsary momba ny alika kely Shar-Pei
Fiona ilay Mini Shar-Pei amin'ny alika kely
Ny Miniature Shar-Pei dia ho fohy, malalaka ary efa ho toradroa raha oharina amin'ny halavan'ny vatana hatramin'ny hahavony. Ny toetra mampiavaka azy indrindra dia ny ketrona be dia be momba ny loha sy ny vatana. Ny lohany dia tokony ho lehibe kely raha oharina amin'ny vatana. Ny maso dia tokony ho maizina, mazava ary miendrika almond, ary tsy milentika na mipoitra. Amin'ny alika maloto, mety ho maivana kokoa ny lokon'ny maso. Tsy avela hidina ao anaty peratra ny fametahana maso. Ny sofina dia tokony ho kely, telozoro, matevina, mandry eo an-doha ary aleo miolakolaka miverina amin'ny sisiny. Tokony hapetraka misaraka sy mandroso eo amin'ny karan-doha sy ny zoro manatrika ny maso izy ireo. Izy ireo dia mety mampiseho fihetsika somary mivezivezy. Ny sofina maratra dia fanilihana. Ny karan-doha dia tokony ho fisaka sy malalaka miaraka amina fijanonana antonony, miaraka amin'ny fiaramanidin'ny handrina sy ny tampon'ny molotra. Ny molotra dia tokony hanana taolana sahaza miaraka amina padding ampy hanomezana endrika toradroa amin'ny loha tsy misy fihoaram-pefy. Ny flies dia tokony hodorana kely. Ny orona dia lehibe sy malalaka ary mety pigment mainty na mifanaraka amin'ny lokon'ny palitao ankapobeny an'ny alika. Amin'ny alika miloko maivana dia ekena ny orona biriky. Ny lela sy ny ao am-bava no mainty maintso kokoa. Mety ho maivana kokoa ny lela noho ny fihenjanana amin'ny hafanana. Nify - manaikitra ny hety. Ny fialan-tsasatra dia lesoka. Ny vozony dia lava halavany, hozatra, napetraka tsara eo an-tsoroka misy dewlap be dia be. Mitroka kely ao ambadiky ny malazo i Topline ary somary miakatra ambony valahany. Mivelatra sy lalina ny tratra ary manitatra hatrany amin'ny kiho ny tratra ary somary miakatra eo ambanin'ny valahany. Ny croup dia miolakolaka somary midina mankany amin'ny rambony avo. Ny rambony dia matevina eo am-potony, mihidy hatramin'ny teboka iray ary tokony hikorontana. Tokony ho eo ambony lamosina ny kalesin'ny rambony. Ny tsy fisian'ny rambony feno dia lesoka manala baraka. Ny soroka dia hozatra, mitongilana ary milamina tsara. Ny forelegs, raha jerena avy eo aloha, dia tokony ho mahitsy, somary mifanelanelana amin'ny kiho akaikin'ny vatana. Raha jerena avy eo amin'ny ilany, ny tongony eo alohany dia mahitsy miaraka amin'ny taolana sahaza, ny pasterns matanjaka sy malefaka. Mifanaraka amin'ny habeny ny tongotra. Aleo ny fanesorana ireo dewclaw eo aloha. Ny valahana dia hozatra, feno ary voafaritra tsara miaraka amin'ny angotra antonony. Ny hock avelany tsara dia fohy ary mifangaro amin'ny tany ary mifanitsy rehefa jerena avy any aoriana. Tsy maintsy esorina ny lalàm-panala any aoriana. Ny halavan'ny palitao azo ekena dia mety palitao soavaly fohy hatramin'ny halavan'ny borosy tsy mihoatra ny 1 santimetatra any aorian'ny vozona. Ny firafitra dia mety miainga amin'ny henjana mafy ka hatramin'ny malefaka, nefa tsy mikofoka na matevina loatra. Ny loko matevina ihany no ekena. Ny alika miloko matevina dia mety manana aloky ny mainty kokoa any aoriana sy amin'ny sofina na volo mainty kokoa manerana ny palitao, toy ny amin'ny sable. Tsy ny loko matevina no lesoka manala baraka. Ny fandehanana dia mandanjalanja ary maimaim-poana. Ny tongotra eo anoloana sy any aoriana dia tokony hirona hivadika amin'ny tsipika afovoany ary ahatratra ny fandrosoana mafy sy ny fiara aoriana.
Ny Miniature Shar-Pei dia tokony ho mailo, matoky tena, milalao, mahay mandanjalanja, be fitiavana, mora zatra ary madio sy milamina. Ny Mini Shar-Pei dia tena mahatoky amin'ny mpikarakara azy, mahay milalao, mavitrika, manjaka ary be herim-po. Izy io dia mifamatotra amin'ny fianakaviany, saingy tsy sariaka amin'ny olon-tsy fantatra. Raha mifanena amin'ny saka sy ny zaza ny alika raha mbola tanora dia matetika dia tsy hanana olana amin'izy ireo. Ny Miniature Shar-Pei dia manana endrika misimisy, fa nahagaga fa mora mandeha, tony, mahaleo tena ary be fandavan-tena. Mahatonga namana mahafinaritra sy mpitily tsara io. Ny Miniature Shar-Pei dia mila mpitantana matoky tena. Raha tsy azonao antoka, tsy mifanaraka, malefaka na malefaka loatra, eo imason'ny alika, dia handray ny toerany izy. Ny Shar-Pei dia mila manana fahefana matanjaka, nefa malefaka ary tsy miova. Ny alika dia tsy maintsy ampianarina ny olombelona rehetra dia eo amboniny amin'ny filaharany. Ireo izay mihevi-tena ho ambony noho ny olombelona dia ho mafy loha sy sahy. Mila fiofanana amin'ny fankatoavana mafy ity karazana ity ampioreno ny fitarihanao . Mety holavin'izy ireo ny baiko avy amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana izay tsy nametraka mpitarika ho azy ireo. Mila tompona izay afaka manao izany izy ireo Alika ambony '. Ny Miniature Shar-Pei amin'ny ankapobeny dia mankahala ny rano ary miezaka mafy arak'izay tratrany mba hisorohana azy. Indraindray ny fampifangaroana alika hafa dia raha toa ka mampiseho fihetsika manjakazaka ny iray amin'ireo alika. -piaraha-monina dia zava-dehibe. Ny Miniature Shar-Pei kely dia tsy dia manjaka loatra noho ny hafa. ny alika toetra miankina amin'ny fomba tompony mitsabo ny alika . Ny alika avela hino fa izy ireo no lehiben'ny olombelona dia hiteraka olana eo amin'ny fitondran-tena. Alika tsy alaina mandeha isan'andro ny fonosana dia hanomboka hampiseho ambaratongam-olana isan-karazany koa. Betsaka ny olan'ny fahasalamana amin'ity karazany ity dia miankina amin'ny andalana niavian'io. Ny tsipika Shar-Pei tsara dia tsy hanana olana amin'ny hoditra, izay aretina mandova.
Hahavony: 17 santimetatra sy ambany (43 cm)
Lanja: 25 - 40 pounds (11 - 18 kg)
Ireo olona tsy fantatra fiaviany na fivontosana fivontosana dia mety ho dingana voalohany amin'ny amolydosis (tsy fahombiazan'ny voa). Hevi-diso iray dia ny Miniature Shar-Pei dia manana olana amin'ny hoditra noho ny ketrona. Eny, ny Miniature Shar-Pei sasany dia manana olana amin'ny hoditra, fa tsy hoe noho ny ketrona ny alika, fa ny toe-piainana nolovaina. Noho ny halaza be loatra tamin'ny taona 1980 dia misy olana amin'ny hoditra nolovaina ny Shar-Pei sasany. Na izany aza, raha mividy amin'ny mpiompy malaza ianao dia tsy tokony ho olana io aretina io. Aza hadino ny mahita mpiompy izay miezaka mitady alika salama.
Ny Miniature Shar-Pei dia hanao tsara amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy io ary tsy haninona raha tsy misy tokontany. Noho ny lohany milomano, ny Miniature Shar-Pei dia mora tohina amin'ny hafanana. Ny alokaloka sy ny rano dia tsy maintsy misy foana. Raha mahazo fanatanjahan-tena ampy izy io, dia ho milamina ao an-trano.
Ny Miniature Chinese Shar-Pei dia mila fanatanjahan-tena, izay misy isan'andro MANDEHANA . Na dia mivoaka an-tongotra aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Aza ampiasaina amin'ny hafanana be loatra izy ireo satria mora tohina.
Hatramin'ny 10 taona
Alika kely manodidina ny 4 ka hatramin'ny 6
Ny Miniature Shar-Pei dia tokony hosasana tsy tapaka. Ny volon'izy ireo dia tsy voahaingo mihintsy. Ity karazana ity dia tsy manana akanjo lava. Ny palitao 'bush' dia nilatsaka herintaona mandavantaona, fa ny palitao 'soavaly' kosa mirona mandritra ny fe-potoana famolahana. Ny molting dia mety hamela ilay alika ho tsy rototra. Ny fandroana indray mandeha isan-kerinandro sy ny fanosorana ny palitao isan'andro mandritra io vanim-potoana io dia hanala ilay volo efa maty sy hamela ny palitao vaovao hitombo. Misy tompona tsy mahazaka ilay palitao henjana.
Ny Miniature Shar-Pei dia novolavolaina ho toy ny kinova ambany amin'ny Shar-pei . Shar-Pei purebred izy io ary ny habe bitika dia avy amin'ny gère recessive izay alehan'ireto alika ireto ao amin'ny ADN-ny. Ny fanantenan'ny mpiompy dia ny fiompiana voafantina, ny génie recessive tsy ho ela dia hanjary manjaka amin'ny karazany. Ny Mini Shar-Pei dia eken'ny AKC ho Shar-Pei, na izany aza tsy eken'izy ireo ny haben'io alika io ary heverina ho lesoka amin'ny peratra fampisehoana. Ny razamben'ny Shar-Pei dia tsy azo antoka. Mety ho taranaky ny Chow Chow izy io, na izany aza, ny lela volomparasy ihany no mampitohy azy ireo. Na izany aza, ny sary eo amin'ny tanimanga dia milaza fa efa nisy ny karazany na dia tamin'ny Tarana Han (206 talohan'i Kristy) aza. Nandritra ny taona maro, Shar-Pei dia nitazona alika fambolena amin'ny ankapobeny any ambanivohitra sinoa, ampiasaina amin'ny fihazana, fiarovana ny tahiry ary fiambenana ny trano sy ny fianakaviana. Nandritra izany fotoana izany, ny Shar-Pei dia nobeazina noho ny faharanitan-tsaina, ny tanjaka ary ny endrik'ilay tarehy. Taty aoriana dia nampiasaina tamin'ny ady alika izany. Ny hoditra marefo sy palitao mihidy be dia novolavolaina mba hanampiana ny alika amin'ny ady, ka nahatonga an'i Shar-Pei ho sarotra ho an'ny mpifanandrina hitazona azy. Nandritra ny Tolom-piavotan'ny Komonista, ny alika dia navotan'ny mpandraharaha Hong Kong antsoina hoe Matgo Law, izay nanao antso tamin'ny Amerikanina tamin'ny taona 1973 tamin'ny alàlan'ny magazine alika mba hamonjy ilay karazany. Amin'ireto santionany vitsivitsy ireto, ny fitiavan'ny Shar-Pei dia nitombo nandritry ny folo taona lasa. Ankehitriny ny Shar-Pei dia ao amin'ny Vondrona tsy miankina amin'ny AKC miaraka amina alika maherin'ny 70.000 voasoratra ho tahiry fototra. Rehefa nampidirina voalohany dia lafo vidy ara-astronomia i Shar-Pei. Ankehitriny dia mitovy amin'ny alika alikaola hafa rehetra no vidiny.
Atsimo, AKC tsy fanatanjahantena
ACA = Fikambanan'ny canine amerikana
APRI - American Pet Registry Inc.
FCI = Federasiona Cynologique Internationale
MSPCA = Miniature Shar-Pei Club Of America
'Winston dia 6 volana, 32.7 lbs., 11 santimetatra ny haavony, 23 santimetatra ny halavany. Winston dia alika mpiambina feno ankehitriny, nitombo lasa lavorary izy mpanao sinto-mahery maharesy lahatra , ary na eo aza ny fiangaviana, ny saranga, ny kolaza ary ny fiofanana manokana, dia manolo-tena hibolisatra amin'izay rehetra sahy mitabataba. Izy dia finiavana mafy , mihaino ary feno hery foana. Ny mason'i Winston dia lasa manga ka hatramin'ny volontsôkôlà fa nandrasana izany. Tsy mila fandidiana ny hoditry ny maso fanampiny efa very ny ketrona.
'Na dia sarotra aza ny mitazona ny sainy any ivelan'ny trano, rehefa afaka mamorona tontolo ianarana mangina dia mamaly haingana izy ary mandray baiko eo akaiky eo. Tsy azo lavina velively fa hendry ity karazany ity, tsy vitan'ny hoe fantatry Winston ny maodelintsika, fa rehefa fantany fa manao zavatra tsy mety izy dia miandry mandra-piasan'ny rehetra ny asany. Na dia efa nifanerasera taminy aza isika nanomboka tamin'ny faha-6 taonany, dia nanana toetra mahaliana 3 izy. 1) Tokony hisy afaho izy amin'ny antoko hafa Hikiakiaka izy, ary amin'ny kiakiaka no tiako holazaina dia ny fidradradradrana avo iray izay tafiditra koa rehefa manandrana fandroana, mpampakatra na fanjaitra . Niezaka nividy vozon'akanjo hoditra ho an'i Winston aho, saingy tena tsy nisy vokany taminy izany. 2) Vondrona misy olona mainty hoditra 2 na maromaro manandrana misompirana biby na manakaiky azy no mampatahotra azy. Mahaliana izany satria tsy nanana traumas ho an'ny alika kely izy taloha. 3) Winston dia mpandrava tontolo rehefa avela irery . Mino aho fa azoko lazaina fa manana azy eo anilako mandritra ny 5 volana voalohany tsy an-kijanona ary mila miverina miasa sy mianatra tampoka aho.
'Tao anatin'ny 6 volana dia fantatro fa tokony ho toy izany foana io karazany io crate voaofana SY ifaneraserana . Mino mafy aho fa ny manampy Mini Shar-Pei amin'ny fianakaviana misy alika olon-dehibe efa niofana dia hahasoa indrindra, satria afaka maka tahaka ny fihetsiky ny alika ho azy i Winston. Aza atsahatra mihitsy ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, nahazo an'i Winston skittish kokoa noho izy nihalehibe ary mila fotoana izy izao hanafana olona vaovao. Amin'ny ankapobeny, Winston dia biby marani-tsaina mahatalanjona, mampihomehy ahy isan'andro izy ary rehefa tsy tafiditra izy dia mino aho fa ho biby tony sy mahafinaritra hifaneraserana izy. Tsy mbola naneho mariky ny herisetra mihitsy izy ary miandry baiko, teny soa na fitsaboana. Raha nanana ketrona bebe kokoa izy, dia ho modely tsara tokony hiterahana. '
'Ity i Winston Chen, alika kely Mini Shar-Pei amin'ny 6 1/2 herinandro. Nalaiko tao amin'ny zaridaina ity sary ity tamin'ny andro fahatelo nananako azy. Tany ivelan'ny ramanavy dia nankany amin'ny trano fidiovana izy, tsy dia nisy lozam-pifamoivoizana mihitsy tao anatiny. Nandeha ho azy teo akaikinay tao amin'ny valan-javaboary izy, tsy nisy fehy, tsy nandositra na nanenjika olona. Winston no alika kely mamirapiratra hitako hatrizay, manomboka amin'ny toetrany ankafiziny ka hatramin'ny toetrany mora miala aina. Na eo aza ny tantaran'ny fiompiana dia tsy mampaninona azy akory ny rano, dia mitsako / manaikitra izy, fa mihaino ary mianatra haingana be. Winston amin'ny ankapobeny dia mandeha an-tongotra 45 minitra isan'andro. Na eo aza ny azy dian-kapoka mafy loha (izay mivoaka rehefa lazaintsika aminy hoe 'Tsia') izy dia be fitiavana sy be fiahiana. Tsy misy snoring, farting kely ankoatry ny fandokafany ny fandriany dia bim-bolo izy rehetra. Mipetraka ao amin'ny trano fonenana iray izahay izao izay toa mety aminy raha mbola eo izy manao fanatanjahan-tena isan'andro . Amin'ny lafiny iray dia halany tanteraka ny kilalao Kong tany am-boalohany ary tsy tiany hisy ifandraisany amin'izany fa izy mandinika amin'ny karipetra, ba kiraro ary lamba famaohana izay tsy liana firy amin'ny baolina tenisy. Teraka 11/28/10 izy, 6 herinandro nilanja 5,9 pounds, tamin'ny 7 herinandro nilanja 7,3 pounds izy ankehitriny. Faly be aho amin'ny safidin'ity karazana ity, hitako fa alika kely mahagaga izy na eo aza izany ary miaraka amina fiaraha-miasa faran'izay betsaka izy dia ho tsara fitsaboana sy alika fianakaviana . '
Koshue Shoio ilay Miniature Shar-Pei amin'ny faha-7 taonany— 'Koshue Shoio dia Mini Shar Pei. Nahazo azy aho taorian'ny fahafatesan'ny habe mahazatra Shar Pei . Raiki-pitia tamin'io karazany io aho rehefa avy namonjy ilay voalohany, Taz. Mety ho mafy loha izy ireo, nefa be fitiavana, tsy mivadika ary sariaka. Mety hampihomehy koa izy ireo. Ny alikako dia mijery fahitalavitra ary toa mitady ao ambadiky ny setriny mba hahitana izay eo. Mora tokoa ny mitsabo azy rehefa ilaina izany, nefa mety hamitaka be koa izy. Manana ny alikany manokana izy, ary aleony Chihuahua na Chi cross. Tsy faly izy raha tsy misy ny biby fiompy. Tiany saka ary koa. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Standard Shar-Pei
Fampahalalana mahazatra Shar-Pei
Syndrome kely alika
Alika miteny mainty
Westiepoo Dog Breed Pictures, 1
Mitandrina Sugar Glider ho fampahalalana momba ny biby sy sary
Bernese Golden Mountain Dog Fampahalalana momba ny fiompiana sy sary
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pugshire
Lisitry ny alika mifangaro Hava
Sary avy amin'ny alika Rhodesianina Ridgeback, 1
Fampahalalana sy sary momba ny alika kely Bulldog anglisy
Alika miteraka A hatramin'ny Z, - Ireo karazana manomboka amin'ny litera H
Caucasian ovcharka mpiandry ondry alemà Mix
alika pomeranian afovoan'ny keeshond amidy
wheaten terrier afangaro amin'ny poodle
mifangaro pitbull miaraka amin'ny bulldog anglisy
ny alika dia miteraka filaharan'ny abidia